Tufaaxa - Waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac (Bogga 14)
AirPods waxay ku yeelan doonaan tartan adag 2019
Sameecadaha casriga ah sida AirPods waxay lahaan doonaan tartan adag sanadka 2019. Apple iyo kuwa la tartamaya waxay keeni doonaan tabo cusub oo farsamo oo muhiim ah.
Muuqaalka Duet waxaa lagu cusbooneysiiyaa dardargelinta qalabka iyo hagaajinta iswaafajinta macOS
Muuqaalka Duet ee macruufka iyo macOS ayaa la cusbooneysiiyay si loogu daro dardargelinta qalabka, haddana Mac wuxuu ku ogaadaa iPad inuu yahay kormeeraha dibedda. Soo ogow!
Apple waxay soo ceshatay boosaskeedii liiska Glassdoor
Daabacaadda Macworld waxaa saxeexay Steve Jobs oo xaraashka ah
Laga bilaabo berri kuwa Apple aruuriya waxay leeyihiin shay cusub oo ay ku dalbadaan: arrinta ugu horreysa ee majaladda Macworld oo uu saxeexay Steve Jobs.
Hoos u dhac weyn oo ku yimid qiimaha saamiyada Apple
Hoos u dhac weyn ayaa ku yimid qiimaha saamiyada Apple. Markan waxay sidoo kale saameyneysaa qiimeynta alaab-qeybiyeyaasheeda oo qiyaasaya hoos u dhac 30%
Apple Pay waxay kordhisaa tirada bangiyada la taageero ee dalal badan
Tirada bangiyada iyo hay'adaha amaahda ee la jaan qaadaya Apple Pay ayaa ku kordhay 10 dal oo aan hoos ku faahfaahinayno.
Khabiirka amniga Jon Callas ayaa ka tagay Apple
Khabiirka amniga ee Jon Callas, oo dhowr jeer ka soo shaqeeyay shirkadda Apple, ayaa go’aansaday inuu ka tago shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino.
Kani waa dukaanka millatariga iyo halyeeyada uu Apple hadda furay
Apple Music si ay ugu dhawaaqdo magacaabista Abaalmarinta Grammy 2019 live
Ku dhawaaqida magacaabista Grammy 2019 waxaa lala socon karaa Apple Music iyo CBS Jimcaha soo socda, Diseembar 7.
Tarjumaadda degdegga ahi waxay bilaabmaysaa imaatinka Skype, ku biirista PowerPoint horraanta 2019
Tarjumaadda tooska ah ayaa si rasmi ah u bilaabatay inay ku timaaddo Skype, waxaanna ku haysan doonnaa PowerPoint wax yar ka dib. Soo ogow!
Warqad gacmeed lagu qoray Steve Jobs oo leh Apple-1 qeexitaan ayaa u socota xaraashka
Bishii Diseembar 5, xaraashka cusub ee qoraallada Steve Jobs ayaa la qabtaa halka lagu muujiyo astaamaha Apple-1
Tani waa istiraatiijiyadda Apple ee sii kordheysa diirada saareysa isticmaaleyaasha
Tani waa istiraatiijiyadda Apple ee sii kordheysa diirada saareysa isticmaaleyaasha. Istaraatiijiyaddu waa inay noqotaa in la helo macaamiil daacad ah marka la barbar dhigo unugyada la iibiyey.
Sida loogu dhejiyo widget-ka Apple Music degel kasta
Halkan ka ogow sida aad si fudud ugu dhexgeli karto liiska muusikada ee Apple Music ama widget album-ka websaydh kasta iyada oo loo marayo HTML iFrame.
Sida loo hubiyo cusbooneysiinta Mac App Store
Haddii aan rabno inaan ogaano meesha bannaan ee looga baahan yahay dirawalkeena adag si aan u hubino haddii aan soo degsan karno cusbooneysiin iyo in kale, ka dib waxaan ku tusi doonaa sida loo ogaado.
Beddel ogeysiiska codka ee emaylka VIP ee laga helay arjiga Boosta
Beddel ogeysiiska codka e-maylka VIP-da ee laga helay arjiga boostada Waxaan ku baraynaa sida loo sameeyo laba qaab oo kala duwan.
Dayactir MacBook Air retina, wuxuu ka jaban doonaa laptop-yada hore
Dayactirka qalabka 'MacBook Air retina' ayaa ka jaban doona laptop-yada hore, taas oo ay ugu wacan tahay naqshadda uu laptop-kan cusubi ku dhex jiro
Laga soo bilaabo Nidaamka 7 illaa macOS Mojave: dib ugu laabo wakhtiga oo leh waraaqo ka soo jeeda dhammaan noocyada macOS
Halkan ka ogow dhammaan isbeddelka aan ku arki jirnay Apple wallpapers ama wallpapers, laga bilaabo Nidaamka 7 illaa macOS Mojave. Iyaga ku soo dejiso bilaash.
Apple on Amazon, Microsoft ayaa ka horeeya Apple, macOS beta, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Apple Music waxay gaaraysaa 56 milyan oo isticmaaleyaal ah, in kasta oo Spotify wali ka horreyso oo xawaare fiican ku socoto
Apple Music waxay si rasmi ah u gaadhay 56 milyan oo macaamiil ah oo bixiya, in kasta oo Spotify wali ku jiro hoggaanka oo si dhakhso leh u koraya
Dukaamada Apple ayaa casaan isu beddelay Maalinta AIDS-ka Adduunka
Apple ayaa casaankeeda bakhaarro casaan ah galisay sheekooyin App Store si ay u xusto maalinta AIDS-ka adduunka. Soo ogow!
Rogue Amoeba Loopback ee loogu talagalay Mac waxaa lagu cusbooneysiiyay warar badan oo xiiso leh
Rogue Amoeba's Loopback 2.0 waa kan, nooc cusub oo loogu talagalay tifaftiraha codka maqalka casriga ah ee Mac.
Sida loo isticmaalo midab leh qiime hexadecimal oo sax ah sida gidaarka loo yaqaan 'macOS'
Halkan ka ogow sida aad ugu adeegsan karto midab kasta oo caado u ah sida gidaarka gidaarka ee 'Mac', adoo og qiimaha ay ku fadhido.
Isticmaalayaasha Apple Watch ayaa 34% ka firfircoon
Waad ku mahadsan tahay Apple Watch, inbadan ayaa ah isticmaaleyaasha helay dhiirigelin ay ku guuraan marar badan.
Apple Music ugu dambeyntii waxay u imaaneysaa dadka ku hadla Amazon ee Echo, waqtigii loogu talagalay Kirismaska
Adeegga qulqulka muusikada ee Apple Music wuxuu imaan doonaa laga bilaabo Diseembar 17 illaa Amazon Echo iyo kuwa ku hadla ee leh Alexa, soo ogow!
Wax soosaarka Apple ee (PRODUCT) RED wuxuu ku deeqay $ 200 milyan
Ikea waxay soo saartay furayaal smart Tr smartdfri ah oo la jaan qaadi kara Homekit mustaqbalka
Ikea waxay soo saartay furayaal smart Tr smartdfri ah oo la jaan qaadi kara Homekit mustaqbalka. Xalalka Ikea ee otomatiga guriga ayaa ka mid ah kuwa ugu jaban
10 × 11 Podcast: Kombuyuutar ama Kiniin?
Toddobaadkan 'Podcast' waxaan uga hadlaynaa mid ka mid ah arrimaha qaar badan oo idinka mid ahi ay mar uun ka hadleen: haddii iPad Pro uu beddeli karo MacBook-ka maanta.
U cusbooneysii 21-inch iMac-kaaga 2017 illaa 64GB oo RAM ah mahadnaqa OWC
U cusbooneysii 21-inch iMac-kaaga 2017 illaa 64GB oo RAM ah mahadnaqa OWC. Qiimaha setku waa 895 XNUMX aad uga hooseeya qiimaha Apple
Ka tirtir qaylada wicitaanka dhibka leh ee ka yimaada Mac-gaaga, oo leh 'Krisp' ee macOS
Ka tirtir buuqa wicitaanka dhibta leh ee ka yimaada Mac-gaaga adiga oo adeegsanaya Krisp ee macOS. Sacab iyo sawaxan sare ayaa ku baaba'aya wada hadalka
Sida sanad kasta, iTunes Connect wuxuu xiri doonaa Disembar 23 ilaa 27
iTunes Connect ayaa xirnaan doona fasaxyada laga bilaabo Diisambar 23 ilaa Diseembar 27, oo loo dhan yahay.
Waa rasmi: Biljimka waxay horeyba u heysatay Apple Pay laga bilaabo maanta
Sida loo hubiyo xaaladda dammaanadda ee shey kasta oo Apple isla markiiba ah
Halkan ka ogow sida aad u hubin karto heerka dammaanadda (AppleCare) ee wax soo saar kasta oo Apple ah, sida Mac, iPhone ama iPad.
Saacadaha aqoon isweydaarsiga ayaa si bilaash ah ugu dhici doona Dukaanka Apple dukaanka Diseembar 1
Saacadaha aqoon isweydaarsiga waxaa laga heli doonaa Dukaan kasta oo Apple ah adduunka oo dhan laga bilaabo Diseembar 1 illaa Diseembar 14.
Microsoft ayaa kala wareegtay Apple shirkadda ugu qiimaha badan
Microsoft waxay dhaaftay Apple inay tahay shirkadda ugu qiimaha badan, marka loo eego suuqgeynta suuqyada saacadihii ugu dambeeyay.
Donald Trump wuxuu soo jeedinayaa in la kordhiyo qiimaha qaar ka mid ah wax soo saarka Apple sababtoo ah canshuuraha laga qaado Shiinaha
Dowladda Mareykanka ayaa 10% kor u qaadi doonta qiimaha taleefannada iphone iyo MacBooks haddii aan heshiis laga gaarin canshuuraha Shiinaha.
Patent cusub oo loogu talagalay muraayadaha Apple VR
Sida loo kiciyo hawsha Sifeynta adoo adeegsanaya toobiye kumbuyuutar
Haddii aad si joogto ah u isticmaasho hawsha 'Dictation function', hoosta waxaan ku tusi doonaa sida loo kiciyo oo loo joojiyo shaqadan iyadoo la adeegsanayo toobiye kumbuyuutar.
Dukaanka khadka tooska ah ee Apple ayaa si rasmi ah u imanaya Amazon
Muddada soo celinta iibsiga Apple waa la kordhiyay
Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa dhageysan doonta Apple ka hor dacwadda la-dagaallanka kalsoonida ee guddiyada codsiyada
Apple waxay ku qasbanaan doontaa inay maanta ku markhaati furto Maxkamadda Sare ee Mareykanka, cabashada ka dhanka ah kalsoonida ee ay qabaan guddiyada codsiyada ee 2011.
Sida loo doorto dhammaan waxyaabaha ku jira galka ku jira Mac oo leh iskudhaf fure fudud
Halkan ka baro sida aad u dooran karto dhammaan waxyaabaha ku jira buugga ama galka ku jira Mac hal mar, oo ay ku jiraan isku-darka furaha fudud.
Sida loo fog desktop ku xirmaan Windows computer ka Mac ah
Halkan ka ogow sida aad ugu xirmi karto adoo adeegsanaya desktop-ka fog ee Microsoft iyo kombiyuutarka Windows ka ah Mac.
Miyaynu arki doonnaa moodooyinka loo yaqaan 'Mac' oo leh hal processor oo keliya oo la heli karo?
Miyaynu arki doonnaa moodooyinka loo yaqaan 'Mac' oo leh hal processor oo keliya oo la heli karo? Dood ku saabsan mustaqbalka processor-yada ku yaal Mac iyo ka mid noqoshada hal nooc oo ah MacBookga
Sida loo dhejiyo qoraalka adoo isku qaab ah oo ku jira Mac
Halkan ka ogow sida aad ugu adeegsan karto shaqaynta qoraalka dhajinta adoo adeegsanaya kumbuyuutar fudud, adigoo qaabkiisii ​​hore ku ilaalinaya macOS.
Rakibaadda MacOS Mojave, shilalka saamiyada, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Sida loo sameeyo codka loo adeegsado HDMI halkii aad ka hadli lahayd Mac-daada gudaha ah
Halkan ka ogow sida aad u samayn karto isticmaalka codka ee HDMI halkii aad ka hadli lahayd kombiyuutarkaaga gudaha markaad isku xirto Mac-gaaga.
Sida loo doorto nooca calaamadaha sheegashada ee loo adeegsado macOS
Halkan ka ogow sida aad si fudud ugu dooran karto nooca calaamadaha oraahda ee aad rabto inaad ku isticmaasho macOS, si aad dukumiintiyadaada u siiso muuqaal wanaagsan.
Tiyaatarka Steve Jobs wuxuu helay Abaalmarin injineernimo oo sharaf leh "Farshaxan dhismeed"
Tiyaatarka Steve Jobs wuxuu helayaa abaalmarinta injineernimada ee "Qaabdhismeedka Qaabdhismeedka". Xeerbeegtida ayaa qadarinaysa qaab dhismeedka birta.
10x10 Podcast: Siri vs Alexa vs Kaaliyaha Google
Sida loo helo lambarka taxanaha ah ee Mac-gaaga si aad u weydiisato caawimaad haddii aysan daarneyn
Halkan ka ogow sida aad ku heli karto nambarka taxanaha ah ee Mac haddii ay dhacdo in uusan shaqeyn ama uusan daarin, si aad ula xiriirto Apple.
Boqoradda guitarist Brian May ayaa sheegtay inuu neceb yahay isku xirka USB-C ee ku saabsan MacBooks-ka cusub
Maaha markii ugu horreysay, mana noqon doonto markii ugu dambeysay, ee dhaqdhaqaaqa Apple ee warshadaha kombiyuutarka ...
Apple Mac wuxuu u shaqeeyaa Black Friday
Waxaan ku tusineynaa waxa ay yihiin dallacsiinta ay Apple noo diyaarineyso inta lagu jiro Black Friday iyo Cyber ​​Monday.
Sida loo sameeyo kormeera si toos ah loogu daawado Mac
Halkan ka ogow sida aad u habeyn kartid kormeer kasta oo dibedda ah si nuxurkeeda si toos ah looga daawado Mac, maadaama aysan jirin ikhtiyaar toos ah.
Mazda waxay si rasmi ah ugu dhawaaqeysaa CarPlay in laga heli karo dhamaan gawaarida laga bilaabo 2014
Soosaaraha gawaarida ee Mazda ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay Barnaamijka Casriyeynta Gawaarida ee 2014
Australia sida had iyo jeer muujisa "qiimo dhimista" Apple ee Jimcaha Madow
Sida loo Furo oo loo Furo Faylka Qaabka RAR ee Mac
Halkan ka ogow afar ikhtiyaar oo gebi ahaanba bilaash ah si aad u furto ama aad uga furto faylasha RAR-ka Mac-gaaga dhibaato la'aan.
Iibinta Mac-da ayaa hoos u dhac ku yimid rubucii hore
Iibinta Mac waxay sii wadaa inay hoos u dhacdo rubuc rubuc kadib, kan dambe wuxuu ka mid yahay kuwa ugu adag shirkadda.
Apple waxay soo iibsataa shirkadda Sirdoonka Cilmiga ah ee Silk Labs
Horaantii sanadkan, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay iibsatay shirkadda Sirkiga Artificial Intelligence Silk Labs.
Apple waxay soo saartay aruurinta caanka ah ee xayeysiinta fasaxa sanadkaan
Apple waxay soo saartay aruurinta xayeysiiska ciida masiixiga, halkaas oo ay ku xayeysiiso badeecooyinkeeda kala duwan, iyo waliba sheekooyin xiiso leh. Soo ogow!
Saamiyada Apple waxay si rasmi ah u galaan hoos u dhac
Saamiyada Apple waxay si rasmi ah u galayaan hoos u dhac, ka dib markii ay hoos u dhigeen qiimahooda in ka badan 20% bishii bil ka sare 12-bilood
Sida loo rakibo daabacaadda 'AirPrint' macOS
Thanks to tiknoolajiyada AirPrint, waxaan ka daabacan karnaa aalad kasta oo aan u baahnayn inaan jir ahaan ku xirno. Si kastaba ha noqotee Mac waa inaan horey u dhignaa.
Khariidado badan oo Apple ah "backpackers" ayaa ka muuqda California
Inbadan "boorsooyin gadaal ah" oo ka socda Khariidadaha Apple ayaa ka muuqda California
Muuqaalka soo socda ee iMac ma muujin doonaa sawirada AMD Radeon RX 590?
Muuqaalka soo socda ee iMac ma muujin doonaa sawirada AMD Radeon RX 590? Qaabkani waa 5% ka dhakhso badan yahay kii ka horreeyay, laakiin sidoo kale wuxuu kululaanayaa 5% ka badan
La kulan RAW Power 2.0 bedel ahaan barnaamijka Sawirada
La kulan RAW Power 2.0 bedel ahaan barnaamijka Sawirada. Hawlaha waxaa loo isticmaali karaa App-ka ama kordhinta Sawirada loogu talagalay Mac
Jimcaha Madow ee Apple ayaa hadda rasmi ah. Ka bilow jimcahan!
Sida ugu dhakhsaha badan loogu wareejiyo kombuyuutarrada Mac-ga ah
Haddii aad rabto inaad u wareejiso miisaska aad maalin kasta ku sameysid Mac-gaaga, qodobkaan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo si deg deg ah oo fudud.
Sida loo tirtiro qalabka Bluetooth-ka ee ku xiran Mac-da
Haddii aad ku daashay aragtida sida liiska aaladaha Bluetooth-ka ee kumbuyuutarkaaga ku xiran ay u weyn yihiin, qormadan waxaan ku tusinaynaa sida loo yareyn karo iyadoo laga takhalusi doono kuwa aadan mar dambe adeegsan.
Microsoft waxay iskaashi la samayn lahayd Apple si ay u xalliso dhibaatooyinka iswaafajinta ee iCloud ee Windows-ka
Microsoft waxay iskaashi la samayn lahayd Apple si ay u xalliso qaar ka mid ah dhibaatooyinka is-waafajinta ee iCloud ee Windows, kaas oo leh cilladaha nooca ugu dambeeya.
Tim Cook wuxuu wareysiga kaga hadlayaa kala duwanaanshaha jinsiga
Tim Cook wuxuu ka hadlayaa kala duwanaanshaha jinsiga wareysi uu siiyay HBO, halkaasoo uu ku leeyahay Silicon Valley ayaa seegtay fursadda
Soo bixitaan weyn oo ah macOS Mojave marka loo eego macOS High Sierra isla muddadaas
Gelinta weyn ee macOS Mojave marka loo eego macOS High Sierra isla muddadaas. Sida laga soo xigtay warbixin Statcounter ah oo muujinaysa inay ku jirto 10kiiba XNUMX
Dakhligaaga USB-C ee MacBook-gu ma gaaban yihiin? Hadda waxaad haysataa qalabka wax lagu rakibo ee Satechi oo laga dhimay Amazon
Ma ku yartahay USB-C-ga MacBook-gaaga? Hadda waxaad haysataa xarumaha adabtarada ee Satechi oo laga dhimay Amazon, munaasabadda Black Friday.
Abuureyaasha Dagaalkii Qabiilooyinka iyo Clash Royale waxay maal gashadaan ciyaaraha loogu talagalay Apple Watch
Supercell, oo ah shirkadda sameysa ciyaaraha sida loo yaqaan 'Clash of Clans', ayaa ku dhawaaqday abuuritaanka Ciyaaraha 'Everywear Games', halkaas oo ay ku horumarin doonto ciyaaraha Apple Watch.
Dayactirka qalabka 'T2', 'Spotify' ee loogu talagalay Apple Watch iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Diyaaraddii ugu dambaysay ee AirPort Express, Extreme iyo Time Capsule, ayaa ka baaba'aysa Apple Store
Diyaaraddii ugu dambaysay ee AirPort Express, Extreme iyo Time Capsule, ayaa ka baaba'aysa Apple Store. Kaliya alaabada qaar ayaa ku harta qaybta dib loo cusboonaysiiyay
Sida loo joojiyo animation-ka barnaamijyada Dock
Thanks to xulashooyinka qaabeynta ee Dock, waxaan joojin karnaa animations-yada astaamaha la muujiyo markaan gujineyno iyaga.
Sida Loo Xidho Dhammaan Tabs-yada Raadiyaha
Haddii aad ka daashay xirida daaqad daaqad ahaan, qodobkaan waxaan ku tusi doonaa sida loo wada xiro.
Miyaad u maleyneysaa in diskigaaga Mac uusan si fiican u shaqeynaynin? Sida loo hubiyo adoon wax rakibin
Halkan ka ogow sida aad ku ogaan karto haddii qalabkaaga 'Hard Drive-ka adag' uu si sax ah u shaqeynayo, ama haddii uu leeyahay dhibaato u baahan fiiro gaar ah.
Apple waxay gebi ahaanba cusbooneysiineysaa boggeeda alaabooyinka dib loo cusbooneysiiyey
Apple waxay gabi ahaanba dib u habeyn ku sameysay degelkeeda badeecadaha dib loo cusboonaysiiyay, iyadoo ay ku jiraan warar faa iido badan leh. Soo ogow!
Evernote cusbooneysiinta macOS ee qaabka mugdiga ah
Evernote ee macOS waxaa lagu cusbooneysiiyay qaab mugdi ah nooca 7.6, iyo sidoo kale ku darista hagaajinta marin u helka
Apple wuxuu sii daayaa beta labaad ee watchOS 5.1.2 iyo beta saddexaad ee tvOS 12.1.1 ee loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple wuxuu sii daayaa beta labaad ee watchOS 5.1.2 iyo beta saddexaad ee tvOS 12.1.1 ee loogu talagalay horumariyeyaasha, toddobaad kadib markii la sii daayay betaskii ugu dambeeyay
Final Cut Pro ee Mac waxaa lagu cusbooneysiiyaa waxyaabo badan oo cusub
Final Cut Pro ee Mac ayaa lagu cusbooneysiiyay astaamo cusub sida taageerada kordhinta rasmiga ah, yareynta buuqa smart, iyo inbadan.
Apple wuxuu sii daayaa beta saddexaad ee macOS 10.14.2 loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple waxay sii deysay macOS 3 Mojave beta 10.14.2 oo loogu talagalay horumariyeyaasha, oo hadda la heli karo. Halkan ka ogow warkiisa iyo sida loo rakibo Mac-gaaga.
Tani waa sida Dukaanka cusub ee Apple ee ku yaal Champs Elysees uu u ekaan doono magaalada Paris
Waxaan ku tusineynaa sawirradii ugu horreeyay ee waxa uu noqon doono Apple Store cusub oo astaan ​​u ah Faransiiska, oo ku yaal Champs Elysees ee Paris.
Kirismaska ​​ayaa ku soo socda Apple: hagaha hadiyadaha kirismaska ​​ayaa diyaar ah
Apple waxay horeyba ugu daabacday boggeeda internetka hageeda hadiyadaha ugu fiican ee shirkadda loogu talagalay Kirismaska, iyadoo alaabteeda iyo qalabkeeda ay yihiin kuwa ugu waaweyn. Soo ogow!
Kiwi oo loogu talagalay Gmail-ka loogu talagalay Mac waa la cusbooneysiiyaa oo ay ku jiraan miirayaasha si aad u hagaajiso boostadaadu
Kiwi oo loogu talagalay Gmail-ka loogu talagalay Mac ayaa dhowaan la cusbooneysiiyay, oo lagu soo daray miirayaasha sidii ugub, oo kuu oggolaan doonta inaad waraaqahaaga si xulasho leh u abaabusho.
Hadda waxaad ka iibsan kartaa 15-ka "MacBook Pro oo ay la socdaan AMD Radeon Pro Vega sawirada
Hadda waxaad ka iibsan kartaa 2018-inch MacBook Pro 15 oo leh AMD Radeon Pro Vega 16 iyo 20 sawirada dukaanka khadka tooska ah ee Apple.
Apple waxay kiraysatay shirkadda Nokia si ay ula wareegto Hindiya
Si loo isku dayo in shirkada loo siiyo kor u kac gudaha Hindiya, Apple waxay kireysatay shirkad heer sare ah oo ka socota Nokia.
Sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo heesaha aan ku kaydinay iTunes
Helitaanka hees aan ku kaydinay iTunes waa geedi socod aad u fudud oo waxay qaadan doontaa oo kaliya dhowr ilbiriqsi. Waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo.
Apple wuxuu sii wadaa inuu ku dhaco suuqa saamiyada maalgashadayaashuna way argagaxaan
Barnaamijka Spotify ayaa si rasmi ah u yimid Apple Watch
Codsiga rasmiga ah ee 'Spotify' ee loogu talagalay Apple Watch ayaa ugu dambayntii maanta si rasmi ah u yimid dhammaan adeegsadayaasha. Raadi sida loo soo dejiyo halkan.
Sida looga saaro farriinta "U cusbooneysiinta macOS Mojave" ee macOS High Sierra
Haddii aad ku daashay fariinta la sheegay ee u muuqata mid kasta oo saddexdii ah macOS High Sierra si aad ugu cusbooneysiiso macOS Mojave, oo aadan rabin inaad sameyso xilligan, waxaan kuu sharxaynaa sida looga saaro.
Sida loo sameeyo Siri ka libdhi toolbar-ka Mac
Halkan ka ogow sida aad uga takhalusi karto toobiyeha 'Siri' ee ka muuqda bar-tilmaameedka dusha sare ee Mac-gaaga.
Sida loogu qasbo degel inuu dib u raro adoon isticmaalin keydka Google Chrome
Haddii aad si joogto ah u isticmaasho Gogole Chrome si aad u dhex marto, xeeladdan ayaa laga yaabaa inay waxtar badan leedahay markii aad booqanaysid degellada aad ka hesho.
Sida loo soo dejisto farta San Francisco ee loogu talagalay Mac
Apple waxay na siisaa suurtagalnimada soo dejinta font San Francisco, font-ka asal ahaan loo isticmaalo SS.OO. ka yimid Apple.
Ka dhig asalka ah xaruntaada terminalka Mac gebi ahaanba hufan
Halkan ka ogow sida aad uga dhigi karto asalka daaqada terminal-ka ee Mac gabi ahaanba mid hufan, oo muujinaya waxa ka dambeeya.
Sida loo sameeyo Mac-gaaga si uu kor ugu akhriyo qoraal kasta adiga oo aan wax rakibin
Markaa Mac-gaaga si aad kor ugu aqriso qoraal kasta oo aad ku xulato codsi gudahood, adigoon wax ku rakibin.
MacBook Air, Mac mini, iPad Pro, iyo inbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Sida loo kiciyo xisaabiyaha buuxa ama sayniska ee Mac
Halkan ka ogow sida aad u tusi karto dhammaan xulashooyinka kalkuleytar ee 'Mac' adigoon wax rakibin, oo ay ku jiraan dhammaan xulashooyinka cilmiyaysan.
Waxaad hadda ka iibsan kartaa Amazon mini cusub 2018 Amazon Amazon Spain: qiimaha iyo xiriidhada
Mac mini cusub 2018 ayaa durbaba bilaabay inay ka helaan shabakada Amazon.com. Halkan ka baro noocyada la heli karo iyo qiimahooda u dhigma.
Apple waxay tabarucaad u fidisaa dadka ay waxyeelada ka soo gaadhay dabkii California
Laga soo bilaabo Apple waxay ka sameynayaan deeqo si ay u caawiyaan dhibbanayaasha dabka California, sida uu ku xaqiijiyay Tim Cook bartiisa Twitter-ka. Soo ogow!
Barnaamijka Beddelka MacBook Pro SSD cusub Juun 2017 - Juun 2018
Barnaamijka bedelka cusub ee MacBook Pro SSDs laga bilaabo Juun 2017 ilaa Juun 2018. Waxaad u baahan tahay inaad ka hubiso lambarka taxanaha ah ee Mac
Sida loo xoojiyo zoom-ka Mac si loo weyneeyo waxyaabaha ku jira
Halkan ka ogow sida ugu fudud ee aad ugu dhaweyn karto wax kasta oo ku jira Mac adoo isticmaalaya Apple weyne u gaar ah.
Sidee si toos ah loogu tirtiraa faylalka ku jira Mac-keena iyada oo aan la xaqiijin tirtirka
Haddii aad ku daashay fariinta xaqiijinta ee macOS na tuseyso markii aad tirtireyso feylasha, waxaan ku tusi doonaa xeelad yar oo aad kaga fogaan karto.
Apple waxay rabtaa inaad ogaato in MacBook Air iyo Mac mini laga sameeyay caag dib loo warshadeeyay
Apple marwalba waxay ahayd mid miyir qabta deegaanka. Intii lagu guda jiray 2017 iyo 2018 wuxuu helay dhowr hambalyo oo ku saabsan adeegsiga ...
Apple wuxuu sii wadaa inuu "is muujiyo" Dukaankii ugu horreeyay Apple ee Thailand
Apple wuxuu sii wadaa inuu ku faano Dukaankii ugu horreeyay Apple ee Thailand
Sida looga baxo iCloud ee Mac-keena ah
Haddii aad qorsheyneyso inaad iibiso Mac-gaaga, waxaad xiiseyn kartaa inaad ogaato sida aad u tirtiri karto dhammaan xogta la xiriirta koontadaada iCloud.
Apple waxay ku dhawaaqday cillad meesha bixiyeyaasha podcast ay la kulmayaan dhibco booqashooyinka, halkan ka ogow!
Baytariyada cusub ee MacBookga waa la beddeli karaa iyadoon kiiska la beddelin
Batariyada ku jira MacBook Air 2018 si toos ah ayaa loo beddeli karaa, iyada oo aan la taabanin kumbuyuutarka ama trackpad. Halkan ka ogow!
Podcast 10 × 09: iPad Pro oo aan lahayn iOS si loo waafajiyo
Podcast-kii ugu dambeeyay waxaan dib u eegnay, usbuuc kadib, badeecooyinka cusub ee Apple soo bandhigtay usbuucii hore, iyo ra'yigeenu waxyar ayuu iska beddelay.
Apple wuxuu sii daayaa beta labaad ee macOS 10.14.2 loogu talagalay horumariyeyaasha
Apple waxay horey u sii deysay beta 2 ee macOS 10.14.2 loogu talagalay soo-saareyaasha, sida muuqata war la'aan badan, maadaama ay horeyba ugu dhacday beta-kii hore. Soo ogow!
Qaybta suuqa ee HomePod ayaa sii kordheysa
In kasta oo ay ka gaabinayso Apple inay filan karto, HomePod wuxuu sii wadaa inuu kobciyo saamigiisa suuqa rubuc rubuc kadib
Dukaanka Apple ee Thailand waa: "Muujinta ugu wanaagsan ee wax kasta oo Apple qabato"
Dukaanka Apple ee Thailand waa: "Muujinta ugu wanaagsan ee wax kasta oo Apple sameyneyso," sida ay sheegtay Angela Ahrendts, oo leh Ive design iyo Maanta munaasabadaha Apple
Miyaan u adeegsan karnaa qaybta cusub ee 'MacBook Air retina' si aan wax uga bedelno Final Cut?
Miyaan u adeegsan karnaa qaybta cusub ee 'MacBook Air retina' si aan wax uga bedelno Final Cut? YouTuber Kraig Adams waxay sameysay tijaabo iyadoo la adeegsanayo tifaftiraha caanka ah ee Apple
Isbarbar yaridda Qalabka 3 ayaa ku yimid macOS Mojave taageerada qaabka mugdiga ah iyo astaamo cusub
Isbarbar dhigaya Qalabyada loogu talagalay Mac ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 3.0, oo keenaya astaamo cusub iyo taageero loogu talagalay macOS Mojave mode dark. Soo ogow!
Sida loo kiciyo ama loo joojiyo Dashboardka ku jira macOS Mojave
In kasta oo xaqiiqda ah in si ka yar loo isticmaalo, haddana Dashboard-ka waxaa wali lagu heli karaa macOS Mojave. Qodobkaan waxaan ku tusineynaa sida aan u dhaqaajin karno.
Sida loo ogaado font ay adeegsato degel leh Mozilla Firefox
Halkan ka ogow sida aad ku ogaan karto farta ama nooca ay adeegsato degel leh Font Finder kordhinta bilaashka ah ee Mozilla Firefox.
Kuwani waa lambarrada 'maaliyadeed' ee Apple ee 2018
Kuwani waa lambarada "aan-dhaqaale ahayn" ee Apple ee 2018. Xogta kale ee aasaaska u ah natiijooyinka sannadaha soo socda ayaa la falanqeynayaa.
Sida loo ogaado haddii iCloud uu hoos u dhacay ama haddii xiriirkiina uu burburayo
Halkan ka ogow sida aad ku ogaan karto haddii mid ka mid ah adeegyada iCloud uu hoos u dhacay, ama haddii ay dhibaato ku tahay isku xirnaantaada kaa horjoogsanaya inaad gasho.
AirPod-yada cusub ayaa ku dhow kadib markay helaan shahaadada Bluetooth SIG
AirPod-yada cusub ayaa ku soo dhowaanaya kadib markii ay heleen shahaadada Bluetooth SIG. AirPodsku waxay yeelan doonaan Bluetooth 5.0 oo u oggolaan doona waxqabad wanaagsan
Apple Pay waxay si rasmi ah ugu degtay Jarmalka, haa, hadda
Sida loo kiciyo ama loo joojiyo cusbooneysiinta barnaamijka otomaatiga ah ee macOS Mojave
Halkan ka ogow sida aad u awoodsiin karto ama aad u joojin karto cusbooneysiinta otomaatiga ah ee barnaamijyada ka socda App Store-ka macOS Mojave sida aad doorbideyso.
La wadaag sawiradaada martigelinta Sawirada loogu talagalay macOS qof kasta
La wadaag sawiradaada martigelinta Sawirada loogu talagalay macOS qof kasta, ha lahaadaan wax soo saarka Apple ama ha haysan, dhawr tallaabo oo keliya
Deji qaabka "Ha dhibin" si aad si toos ah ugu dhaqaajiso Mac
Halkan ka ogow sida aad u dejin karto habka "Ha dhibin" si aad si toos ah ugu hawlgasho waqtiyada qaarkood Mac.
Southlake Apple Store wuxuu furaa cusbooneysiinta kadib, waqtiga alaabada Muhiimka ah
Southlake Apple Store wuxuu furaa dayactirka kadib, waqtiga alaabada Muhiimka ah, oo aan arki doono Nofeembar 7.
Sida looga hortago in Spotify uusan si toos ah u furin markii aad daarto Mac-gaaga
Halkan ka ogow sida aad u xaqiijin karto in Spotify uusan si otomaatig ah u furin markii aad daarto Mac-gaaga, sidoo kalena aad dib u dhigto bilowga.
Muhiim, macOS finalka, natiijooyinka maaliyadeed iyo waxbadan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Sida loo qiyaaso sawirka ku jira Mac adigoon wax rakibin
Halkan ka ogow sida aad dib ugu cabiri kartid ama aad ugu beddeli karto sawir ka yimid Mac adigoon wax rakibin, adoo isticmaalaya aaladda Falanqeynta
Sida loo beddelo midabka kuu muuqda marka aad riixdo astaanta macOS Mojave
Halkan ka ogow sida aad si fudud ugu beddeli karto midabka farqiga u ah iyo muujinta midabka ku jira Mac-gaaga haddii aad hore u haysatid macOS Mojave.
Khariidadaha Apple ayaa si wanaagsan uga muuqda Khariidadaha Google meelaha qaarkood si faahfaahsan
Khariidadaha Apple ayaa si wanaagsan uga muuqda Khariidadaha Google meelaha qaarkood si faahfaahsan. Apple wuxuu balan qaaday inuu dabooli doono 100% Mareykanka isla markaana uu horumarin doono adduunka intiisa kale
Jaangooyooyinkii ugu horreeyay waxay ka muuqdaan Geekbench ee Mac mini cusub kahor intaan la bilaabin
Mac mini-ka cusub ee 2018-ka ah waxaa horay u arkay Geekbench, wuxuuna awood u leeyahay inuu dhaafo midka hadda jira ee loo yaqaan 'MacBook Pro, iMac' iyo 'Mac Pro'. Halkan ka ogow!
Stockholm waxay diiday qorshaha Apple ee ah in Apple Store laga furo beerta taariikhiga ah
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan aragnay sida Apple ay u xulaneyso meelaha ama dhismayaasha astaamaha ah si ay u furaan Apple Stores cusub oo ...
Apple ayaa joojin doonta wadaagida tirooyinka iibka ee alaabteeda laga bilaabo bisha Diseembar
Laga bilaabo bisha Diseembar, Apple wuxuu joojinayaa inuu la wadaago tirooyinka iibka ee badeecadiisa warbixinnadiisa, wuxuuna u magacaabi doonaa qaybaha. Soo ogow!
AppleCare + caymiska waxyeelada shilalka ee Mac wuxuu ku fidayaa wadamo badan, in kastoo uusan wali gaarin Spain
AppleCare + ilaalinta Mac, oo sidoo kale daboolaysa waxyeello jireed oo shil ah, ayaa hadda sidoo kale laga iibsan karaa dalal dhowr ah oo ku yaal Yurub iyo Mexico.
Qor natiijooyinka maaliyadeed ee umuuqda inaysan ku filneyn
Flickr wuxuu joojiyaa inuu 1 TB si bilaash ah u kaydiyo sawirrada, isagoo ku daraya xaddiga 1.000 sawir oo lagu kaydiyay akoonno bilaash ah
Flickr ayaa joojiyay bixinta 1 TB oo ah kaydinta sawirrada iyo fiidiyowyada si bilaash ah, isagoo ku daray xaddiga 1.000 faylal ah, iyaguna waxay hagaajiyeen nooca Pro.
Kaararka Nvidia wali lama jaan qaada macOS Mojave
Kaararka Nvidia wali lama jaan qaada macOS Mojave. Afhayeen u hadlay Nvidia ayaa sheegay in ay tahay Apple cidda ay tahay in ay ansixiso wadayaasha
Shirkadda Spotify waxay gaaraysaa 87 milyan oo macaamiil ah oo bixiya
Tirada isticmaaleyaasha Spotify maanta waa 87 milyan oo la bixiyay halka tirada dadka isticmaala oo bilaash ah ay tahay 191 milyan.
Kal-fadhiyada "Maanta Apple" ee ku saabsan nuxurka 'MacBook Air'
Kulamada "Maanta Apple" ee ku saabsan nuxurka 'MacBook Air'
Tiknoolajiyada Apple Pay waxay imaaneysaa Belgium
Tikniyoolajiyadda lacag bixinta elektarooniga ah ee Apple, Apple Pay waxaa laga heli doonaa Belgium billowga bisha soo socota.
15-inch MacBook Pros waxay lahaan doontaa qaabeyn cusub oo leh sawirada Radeon Pro Vega
15-inch MacBook Pros wuxuu yeelan doonaa qaabeyn cusub oo leh Radeon Pro Vega sawirada, kaas oo bixin doona ilaa 60% waxqabad dheeri ah
Keydso maqaalladaada moobilkaaga oo ku sii wad Mac-ka jeebka
Halkan ka ogow sida aad uga badbaadin karto bog internet taleefankaaga gacanta (iOS ama Android), ka dibna sii wad akhriska Mac-gaaga ama aaladaha kale ee jeebka ku jira.
10 × 8 Podcast: iPad-ka cusub Pro, MacBook Air iyo Mac mini
10x8 Podcast: iPad Pro Cusub, MacBook Air iyo Mac mini
Ku raaxayso soo bandhigga rasmiga ah ee Mac Mini, MacBook Air iyo iPad Pro iyada oo loo marayo bogga Apple
Haddii aad seegtay fiidiyowga soo-bandhigga ee cusub ee MacBook Air, Mac Mini iyo iPad Pro, iyada oo loo marayo websaydhka Apple, waad ku raaxeysan kartaa.
Miyaadan arkin nuxurkii shalay? Waa tan 9 daqiiqo oo kooban oo fiidiyoow ah
Kuwani waa sifooyinka loo yaqaan 'T2 chip' oo ay ku jiraan kuwa kale ee ku jira Mac-da cusub
Kuwani waa astaamaha T2 chip ee ka dhex jira kuwa kale ee ku jira Mac-yada cusub, oo diiradda lagu saaray asturnaanta iyo amniga kombiyuutarada Mac
Sida looga hortago in Mac-gaagu si toos ah u seexdo
Halkan ka ogow sida aad si fudud ugu sameysan kartid Mac-gaaga si uusan otomaatig u seexan markaad isticmaaleysid.
Nooca ugu dambeeya ee macOS Mojave 10.14.1 hadda waa la heli karaa
Ragga ka socda Cupertino ayaa sii daayay beta lixaad ee waxa uu noqon doono cusbooneysiinta soo socota ee macOS Mojave version 10.14.1
Ku bilow bilowga muhiimka ah ee Mac iyo iPad Pro waqtiga loogu talagalay
Sida loo sameeyo Safari tabs furan kalfadhigii hore
Haddii aan had iyo jeer u adeegsanno biraawsarkeenna si aan ula tashanno isla bogagga shabakadda, haddii ay yihiin bar-kulanno, baloogyo, bogagga warfaafinta news
Apple waxay joojisay balaarinta Apple Stores ee Shiinaha sababo la xiriira cajalad casaan iyo khayaano ah
Apple waxay gaabisay balaarinta Apple Store ee Shiinaha sababo la xiriira cajalad casaan iyo khayaano ah. Shirkadda ayaa gaabisay furitaanka dukaanka Apple.
Dukaankii Apple wuu xirmay! Muhiimadda Mac iyo iPad way dhowdahay
Sida loo muujiyo astaamaha degelka ee Safari oo leh macOS Mojave
Halkan ka ogow sida aad ku heli karto astaamo lagu muujiyo tabari Safari ah marka aad booqaneyso degello badan oo internetka ah macOS Mojave.
Sida loo beddelo jinsiga codka Siri ee Mac
Halkan ka ogow sida aad u dooran karto haddii aad rabto Siri inay yeelato codka nin ama naag ku jirta Mac-gaaga hab fudud.
Tani waa dhismaha gaarka ah ee lagu qaban doono Brooklyn Keynote
Tani waa dhismaha gaarka ah ee lagu qaban doono Brooklyn Keynote. Waa markii ugu horreysay tan iyo 2002 oo Apple ay dhacdo ku qabato Xeebta Bari
Snap wuxuu bilaabay Snap Camera oo loogu talagalay macOS iskudhafka Twitch, Skype iyo Youtube
Snap wuxuu bilaabay Snap Camera oo loogu talagalay macOS oo leh isdhexgalka Twitch, Skype iyo Youtube. Waxaa ka mid ah shaandhada sumcadda iyo xisbiga saddexaad iyo muraayadaha indhaha.
Waxay u adeegsadaan Apple Watch duulimaadka si ay u ogaadaan jaangooyada rakaabka
Waxay adeegsadaan saacadda Apple ee duulimaadka si ay u ogaadaan jadwalka rakaabka. Isticmaalaha ayaa goor dambe muujiyey xirfad daawo
Waa tan sida loo daawado barnaamijka Muhiimka ah ee Oktoobar 30
Halkan ka ogow sida iyo goorta aad ka daawan kartid Nuxurka Apple ee ah “Wax badan ayaa ku jira samaynta” Oktoobar 30, si toos ah, aalad kasta.
Podcast 10 × 07: IPhone XR wuxuu tilmaamayaa guul muuqata
Qeyb cusub oo ka mid ah filimka 'Actualiad iPhon podcast', oo aan mar kale uga hadlayno sida loo yeelayo iPhone XR, Apple-ka jaban ee sanadkan.
Billy Crudup iyo Gugu Mbatha-Raw waxay ku biirayaan jilayaasha taxanaha Apple ee Jennifer Aniston
Labadii saxiix ee ugu dambeysay mid ka mid ah taxanaha adeegga fiidiyowga ee 'Apple' waa Billy Crudup iyo Gugu Mbatha-Raw
Tim Cook wuxuu booqday Madrid xafladii HomePod ee Spain
Tim Cook wuxuu booqday Madrid xafladii HomePod ee Spain. Fursad u hel inaad ku dhiirrigeliso af-hayeenka Apple fannaanka Rosalía
Apple wuxuu bilaabaa inuu qurxiyo xarunta soo bandhigida Mac iyo iPad cusub
Apple waxay durbadiiba bilowday inay qurxiso xarumaha martigelin doona soo bandhigista soo socota ee shirkadda, dhacdo aan ku arki doonno iPad Pro iyo Mac cusub.
Sida loogu xiro qalabka wireless-ka ee Mac
Apple waxay ka furi doontaa Bakhaarkii ugu horreeyay ee Apple ee Bangkok bisha Noofambar 10
Apple waxay dukaankeeda ugu horreeya ka furan doontaa Bangkok 10-ka Noofambar. Dhismo gaar ah oo qaab pagoda ah. Waxaan ka helnaa astaanta Apple dahab
Maxaan samayn karnaa markii qalab USB ah uusan ka shaqeynaynin Mac-ga
Dib u dhigista amarka hawada ee 'MacBook Air', soo jeedi moodooyin cusub oo bilaabmaya 30ka Oktoobar
Dib u dhigista amarka MacBookga waxay soo jeedineysaa moodooyin cusub oo bilaabmaya Oktoobar 30, sida ku cad emaylka ay Apple u dirtay macaamiisha
Intel kuma talo jirto inay ka tanaasusho soosaarka 10nm chips
Intel ma doonayo inuu ka tago wax soo saarka 10 nm oo jajab ah, waa erayada agaasimaheeda Bob Swam. Noqo sida ay noqon karto, 10nm chips ayaa ku jira 2019
Apple wuxuu iska diiwaangeliyaa Komishanka Eurasian seddex nooc oo cusub oo Mac ah oo arki doona iftiinka Oktoobar 30
Haddii ay dhacdo in qof kasta uu shaki ka qabo suurtagalnimada in Apple uu cusbooneysiiyo noocyada kombiyuutarada Mac-da ...
Tartamayaal badan oo HomePod ah. Amazon Echo ku hadla smart ayaa hadda lagu hayn karaa Spain
AirPower ayaa imaan doonta, meel kasta oo ay qorraxdu ka soo baxdo
AirPower waa la iibin doonaa, Apple-na waxay dadaalkeeda oo dhan gelineysaa
Sida si otomaatig ah loo qariyo ama loo muujiyo baarka menu-ka sare ee Mac
Apple wuxuu furayaa istuudiyaha cusub ee Beats1 magaalada New York
Wiilasha Cupertino ayaa istuudiyaha cusub u furay xarunta Apple Music ee Beats1 ee magaalada New York.
Shil cusub oo ku lug leh gaariga darawalnimada iswada ee Apple
Bishii Oktoobar 15, shilkii labaad ee baabuur wadista iswada ee Apple ayaa la diiwaangeliyey.
Tim Cook wuxuu socdaal ku marayaa qaaraddii hore
Websaydhka shaqada ee Apple ayaa la cusbooneysiiyay waqtiyada cusub
Muuqaalka Sawirka Google Chrome ee sawirka ayaa hadda laga heli karaa asal ahaan
Nooca ugu dambeeya ee Google Chrome, lambarka 70, wuxuu aakhirkii noo oggolaanayaa inaan dhigno fiidiyoow ka socda daaqad sabaynaysa.
Sida laga soo xigtay Jony Ive, Apple Watch maahan saacad
Jony Ive, wuxuu xaqiijinayaa in Apple Watch aysan waligeed ka fiirsan shirkaddu inay tahay saacad ay isticmaasho, casriyeyntii ugu dambaysayna waxay tusaale cad u tahay tan.
16-inch MacBook ayaa ka muuqda beta-kii ugu dambeeyay ee macOS Catalina 10.15.1
Sawirka ugu horreeya ee rasmiga ah ee waxa uu noqon doono 16-inji MacBook Pro waxaa laga heli karaa beta-kii ugu dambeeyay ee macOS Catalina
Muhiim u ah Oktoobar 30, ku-deeqidda 1.000 saacadood oo Apple ah iyo in ka badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Jony Ive wuxuu ka hadlayaa Apple Park iyo aragtida Apple Car
Jony Ive wuxuu ka hadlayaa Apple Park iyo rajada Apple Car, iyadoo ah fikrad ka hor imaaneysa naqshad aad u weyn iyo caqabado soo saar.
Maxaad ka rajeyneysaa muxaadaradu markay tahay Oktoobar 30? [Codbixin]
Maxaad ka fileysaa muxaadarada Oktoobar 30?
Apple ayaa si toos ah u baahin doonta 30-ka Oktoobar ee muhiimka ah
Munaasabadda ay qabaneyso Apple bisha Oktoobar 30 waxaa lala socon karaa iyada oo loo marayo bogga tooska ah ee Apple.
Intel wuxuu u qaybiyaa kooxda wax soosaarka sadex kooxood si loo hormariyo 10nm chips
Intel wuxuu kooxda waxsoosaarka u qaybiyaa saddex qaybood si loo hormariyo 10nm chips. Saadaasha hadda waxay ka hadlaysaa iibinta iibka 2019
Casuumaad kasta oo loo fidiyo nuxurka, astaan ​​ka duwan
Casuumaad kasta oo loo fidiyo nuxurka astaan ​​kale
Bingo! Apple waxay bilowday inay dirto casuumaad Muhiim ah oo cusub Oktoobar 30
Muhiimad Cusub New October 30 taas oo aan ku arki doonno iPad cusub iyo MacBook cusub
Apple waxay soo bandhigaysaa Mac oo leh ARM sanadka 2020 ama 2021 sida uu sheegayo Ming-Chi Kuo
Apple ayaa Mac ku soo bandhigi doonta ARM sanadka 2020 ama 2021 sida uu sheegayo Ming-Chi Kuo. Hadii warka la xaqiijiyo, waa isbadal muhiim ah oo ka bilaaban doona kooxaha awooda yar.
Iibinta aruurinta balaaran ee alaabada Apple, oo ay kujiraan in kabadan 1.100 Macs
Iibinta aruurinta alaabada Apple, oo ka kooban in kabadan 1.100 kombiyuutar iyo alaabooyin kale.
Waa afar sano tan iyo markii la cusbooneysiiyay Mac mini
Afar sano ayaa laga joogaa markii la cusbooneysiiyay Mac mini. Falanqeeyayaasha sharafta leh waxay filayaan casriyeyn yar oo loo yaqaan 'Mac mini' oo loogu talagalay qaybta xirfadeed.
Podcast 10 × 06: Ka tagida taleefanka guriga
Xirmooyinka abka ee ka socda Mac App Store waqti dheer kuma qaadan doono in la helo
Sida aan ka aqrin karno bogga horumarinta Apple, xirmooyinka codsiga ayaa laga heli karaa Mac App Store
Apple way beenisay inay iibsatay shirkadda Asaii, waxay shaqaalaysiisay oo keliya aasaasayaasheeda
Isniintii la soo dhaafay waxaan ku soo toosnay warka ku saabsan hanashada dhowaan ee Apple, oo ah iib u ogolaatay ...
Safari way joojin doontaa taageerada TLS 1.0 iyo 1.1 sanadka 2020
Borotokoolka amniga ee ay bixiso TLS 1.0 iyo 1.1 tiknoolajiyaddu mar dambe lama jaan qaadi doonaan Safari laga bilaabo Maarso 2020.
Paul Allen, oo ahaa aasaasihii shirkadda Microsoft, wuxuu ku dhintaa da'da 65
Nike + Run Club, waa la cusbooneysiiyay si uu ugu habboonaado Taxanaha Apple Watch 4
Dell wuxuu soo bandhigayaa Ultrawide, kormeer qafiif ah oo 49-inji ah.
Dell wuxuu soo bandhigayaa qalab aad u ballaaran, qafiif ah oo 49-inji ah si uu ula shaqeeyo laba bandhig isla mar ahaantaana qaraar buuxa.
Saddex barnaamij oo dhowaa oo ku xirnaa macOS Mojave deck
Apple waxay iibsan laheyd Asaii, oo ah madal sirdoon macmal ah oo loogu talagalay muusikada
Apple ayaa la sheegay inay iibsatay Asaii, oo ah madal sirdoon macmal ah oo loogu talagalay muusikada, taas oo hagaajin doonta mashiinka soo jeedinta muusikada ee Apple Music.
Tani waa usbuuca muhiimka ah, ma waxaa jiri doona muhiima bisha Oktoobar?
Apple waa inay dhaqaaqdaa toddobaadkan haddii ama haddii iyo haddii aad qorsheyneyso inaad dhacdo cusub ...
Luminar loogu talagalay macOS ayaa lagu cusbooneysiin doonaa astaamo cusub oo lagu hagaajinayo cirka
Luminar loogu talagalay macOS waxaa lagu cusbooneysiin doonaa hawlo cusub oo lagu hagaajinayo cirka, cusbooneysiinta aan arki doonno Nofeembar 1
Iibinta Mac oo hoos u dhacday, xusuusta shaqooyinka iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Apple inay ku deeqdo si ay uga caawiso dadaallada soo kabashada duufaantii Michael
Tim Cook wuxuu muujiyey sida uu uga xun yahay dhibbanayaasha ku dhintey duufaantii Michael wuxuuna caddeeyey inay shirkaddu iskaashi dhaqaale la yeelan doonto.
Bakhaarka Apple ee Covent Garden ayaa dib loo furi doonaa Oktoobar 26
Bakhaarka Covent Garden ee Apple Store ayaa dib loo furi doonaa 26-ka Oktoobar iyada oo lagu samayn doono dayactir ballaadhan, oo la mid ah kii lagu sameeyay Bakhaarka Apple ee Buchanan Street
Heshiis dhexmaray Apple Music iyo Genius si loo aqriyo ereyada heesaha
Heshiiska u dhexeeya Apple Music iyo Genius si loo akhriyo ereyada heesaha biraawsarka, iyadoo la kaashanayo Genius. Taa bedelkeeda, Apple Music waxay macluumaad ka heshay Genius
Gawaarida Khariidadaha Apple ayaa lagu arkay Los Angeles
Mac iibinta ayaa hoos u dhacday QXNUMX inkasta oo MacBook-yada cusub ay heleen
Iibinta kumbuyuutarrada Mac-da waxaa soo gaadhay bareeg daran intii lagu jiray rubuc-saddexaad ee sannadka 2018, in kasta oo la soo bandhigay MacBook-yada cusub.
Dayactirka Apple Store wuxuu ku fiday Beijing
Apple ayaa balaarisay barnaamijka dib u habeynta Apple Store ee Shiinaha, dalka soo saara dakhliga ugu badan ee shirkadda.
Codsiga Sonos ee Mac waa la cusbooneysiiyay, laakiin astaamo yar
Codsiga Sonos ee loogu talagalay Mac waa la cusbooneysiiyay, laakiin kalagoynta howlaha ku jira nooca mac-da iyo daaqadaha, kana adkaanaya howlaha macruufka
Podcast 10 × 05: Waqtiga xaadirka ah iyo mustaqbalka kuwa ku hadla caqliga leh Pablo Guerrero
Soo bandhigiddii usbuucan kadib af-hayeenka caqliga badan ee Facebook-ga oo leh shaashad iyo kamarad gudaha ku jirta iyo soo bandhigida ...
Abaabulaan baararka cuntada ee macOS Mojave
Abaabulaan baararka cuntada ee macOS Mojave. Sida loo abaabulo astaamaha, ka saar oo dib ugu soo celi dadaal la'aan.
Xilli ciyaareedkii labaad ee Carpool karaoke ayaa la soo saaray October 12
Miyay noqon doontaa dhacdada Oktoobar ee Apple inay na barto iPad ama Macbook?
IPad-ka cusub wuxuu yeelan karaa awooda hawlgalka ee MacBook
Katherine LaNasa waxay ku biirtay jilayaasha taxanaha Apple Ma Seexataa? ka yimid Apple
Saxiixii ugu dambeeyay ee Apple ee taxanaha telefishanka ee hadda soo-saarka ah, Ma Huruddaa? waa Katherine LaNasa
Kulamo barnaamijyo oo bilaash ah inta lagu jiro Toddobaadka Barnaamijka EU
XLD qalabka wax lagu beddelo ayaa loo cusbooneysiiyay macOS Mojave
Beddelaha codka 'XLD' waa la cusbooneysiiyaa macOS Mojave, oo lagu taageerayo 64 jajab, shuruudaha Mojave iyo qaabka mugdiga ah
Hawl wadeenka fiilada ee BT wuxuu u isticmaali karaa Apple TV 4k inuu yahay dikoor
Hawlwadeenka fiilada ee BT ayaa u adeegsan kara Apple TV 4k inuu yahay dikoor, sida lagu sheegay macluumaad laga helay wargeys dijitaal ah. Apple iyo BT kama aysan hadlin.
AirPods 2 ma yeelan doonaan ismaamul isku mid ah?
Jiilka labaad ee AirPods wuxuu yeelan karaa ismaamul ka badan maalin buuxda oo dib loo ciyaaro
Waxaan falanqeyneynaa disk yar oo la qaadi karo laakiin leh 2TB oo karti iyo xawaare wareejin sare leh isku xira USB-C
Mid ka mid ah waddamada soo socda ee ay Apple Pay ku degayso waa Sacuudi Carabiya, sida lagu sheegay bogga rasmiga ah ee Apple ku leedahay dalkaas.
Sahlo qaabka sare ee mugdiga sare ee 'macOS Mojave'.
Ku dhaqaaji habka mugdiga ah ee 'High Sierra' ee macOS Mojave, mahadnaqa amarka terminalka, haddii kani yahay qaabka mugdiga ah ee aad ugu jeceshahay
Apple Watch Nike +, waxaa loo bedelay dukaanka Machinist-ka iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Tim Cook wuxuu xusuustaa Steve Jobs sannad-guuradii 7aad ee ka soo wareegtay dhimashadiisa
Tim Cook wuxuu xusuustaa Steve Jobs sannad-guuradii 7aad ee ka soo wareegtay markii uu geeriyooday isagoo farriin soo dhigay. Waxaan dib u eegeynaa xusuusiyayaashii ugu dambeeyay ee aasaasaha Apple
Carrousel du Louvre ee caanka ah Apple Store inuu xirnaado weligiis Oktoobar 27
Dukaanka caanka ah ee Apple Store ee ku yaal Carrousel du Louvre wuxuu xirnaan doonaa weligiis Oktoobar 27 waxqabadkiisana waxaa loo wareejin doonaa Dukaanka Apple ee ku yaal Champs-Élysées
Shirkadda Interbrand ayaa sheegtay in shirkadda Apple ay tahay tan adduunka lagu qiimeeyo
Apple Watch ama iPhone oo ah hab marin loogu helo jaamacadda
Elegance oo ku duuban shaati loogu talagalay MacBook Pro
Gacmo aad u qurux badan oo loogu talagalay laptop-ka Apple MacBook Pro
Qaar ka mid ah dayactirka 2018 iMac Pro iyo MacBook Pro waxaa kaliya lagu hagaajin karaa Dukaanka Apple
Qaar ka mid ah dayactirka 2018 iMac Pro iyo MacBook Pro waxaa kaliya lagu dayactiri karaa Apple Store, maxaa yeelay waa inay maraan ogaanshaha Apple
BeatsX ayaa hoos u dhac ku yimid qiimaha, moodal cusub oo hor leh?
Koobka Cupertino ma rabaan inaan dayactirno MacBook Pro ama iMac Pro
Apple wuxuu ku biirayaa shirkadaha kale ee teknolojiyadda si looga fogaado sharci cusub oo u oggolaanaya xogta in la siiyo dawladaha
Dowlada Australia ayaa dooneysa inay soo saarto sharci u ogolaanaya helitaanka xogta sirta ah ee dhamaan shirkadaha tikniyoolajiyadda.
Nooca iTunes ee marin u helka App Store waa la cusbooneysiiyay laakiin wali lama jaanqaadi karo macOS Mojave
Nooca iTunes oo marin u leh App Store ayaa hadda la cusbooneysiiyay laakiin wali lama jaanqaadi karo macOS Mojave
Apple waxay soo bandhigi doontaa natiijooyinka rubuc 4 bisha Nofeembar 1
Apple waxay soo bandhigi doontaa natiijooyinka rubuca 4aad bisha Noofambar 1. Kobaca iibka ee 18 ilaa 20% iyo koritaanka hoose ee xadadka ayaa la filayaa
Wasaaradda Codka ayaa ku biirtay Apple Music si gaar ah
Sida loo arko xogta EXIF ​​ee Sawirada barnaamijyada Mac
Codsiga asalka macOS, Sawirada, wuxuu noo ogolaanayaa inaan ogaano xogta badan ee sawirada adigoon isticmaalin codsiyada dhinac saddexaad.
Podcast 10 × 04: Waxaan horey u hayney "Albaabada" sanadka 2018
"Creatividad para todos" ayaa hadda laga heli karaa buugaagta Apple
Kani waa NativeConnect, macmiilka cusub ee Mac ee App Store Connect
Kani waa NativeConnect, macmiilka cusub ee Mac ee App Store Connect, oo si buuxda loogu talagalay Mojave. Waxaa lagu sii deyn doonaa 2019
Apple waxay ugu deeqday 1 milyan oo doolar si loogu caawiyo dadka ku waxyeeloobay dhulgariirkii iyo Tsunami ku xigtay Indonesia
Qaar ka mid ah Apple Watch waxay la kulmaan dib u soo buuxinta arrimaha la leh watchOS 5.0.1
Apple ayaa soo saartay cusbooneysiin loogu talagalay Apple Watch, watchOS 5.0.1, oo ah cusbooneysiin lagu xalliyo dhibaatooyinka qaarkood
Sida loo dejiyo cusbooneysiinta barnaamijka ee Mac App Store cusub
La Maquinista wuxuu noqonayaa Apple Store kii ugu horreeyay ee dib u habeyn lagu sameeyo dalka Spain
La Maquinista wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay ee Apple Store ee dib u habeyn lagu sameeyo dalka Spain iyadoo la adeegsanayo miisas cusub iyo shaashad ballaaran oo loogu talagalay Maanta shirkadda Apple.
Intel wuxuu sii wadaa ujeedkiisa inuu soo saaro 10nm chips
Intel wuxuu sii wadaa inuu hadafkiisu yahay inuu soo saaro 10nm chips, halka uu dhameystirayo habka wax soo saarka ee 14nm chips.
Imaatinka Mojave, Apple Watch ayaa qarxay, betas cusub iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Imaatinka macOS Mojave, Apple Watch ayaa qarxay, betas cusub iyo waxyaabo kale oo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Hadiyado garaacis ah hadiyado ayaa dhamaanaya
Illaa 5 Apple Store ayaa dib loo furay maanta oo Sabti ah ka dib dib u habeyntiisa
Illaa 5 AppleStore ayaa dib loo furay maanta oo Sabti ah ka dib dib u habeyntiisa, afar ka mid ah waxay ku yaalliin xarumaha dukaameysiga Mareykanka iyo mid Australia
Ma taqaanniin Sii Wadista Kaamirada ee macOS Mojave?
Logic Pro X waa la cusbooneysiiyaa iyadoo lagu darayo tiro badan oo shaqooyin ah
Logic Pro X, oo ah mid ka mid ah aaladaha ugu fiican suuqa ee loogu talagalay abuurista iyo tafatirka muusikada, ayaa hada la cusbooneysiiyay iyadoo lagu daray howlo cusub.
Isbarbar dhigga 14 ayaa la cusbooneysiiyaa oo hadda wuxuu taageeraa macOS Mojave
Codsiga aan ku awood siin karno nidaamyo kala duwan oo hawlgal ah oo ku saabsan Mac-keena, 'Paralles Desktop', ayaa hadda la cusbooneysiiyay si uu ula jaan qaado macOS Mojave.
Falanqaynta Teknolojiyada Safari waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 66
Faylasha Dalbashada ee OneDrive hadda waxaa lagu heli karaa beta
Cusbooneysiinta soo socota ee OneDrive ee Mac ayaa noo oggolaan doonta inaan la shaqeyno feylasha ku keydsan daruuraha Microsoft dalab ahaan.
Nooca iTunes-ka ee marin u helka App Store lama jaanqaadi karo macOS Mojave
Dhaqdhaqaaq aan macno lahayn, Apple ma ogola in la rakibo nooca iTunes oo marin u leh App Store-ka macOS Mojave.
Mac-yadaas waxaad ku oran kartaa "Hey Siri" macOS Mojave
"Hey Siri" waxaa lagu karti galiyay barnaamijka iMac Pro macOS Mojave iyadoo loo mahad celinayo T2 chip. Mustaqbalka Macs wuxuu dhex marayaa isdhexgal weyn oo lala yeelanayo SIri
Apple Watch Series 4 waxay dalbanayaan saqafka: Apple waxay kireysataa soo saare labaad
Apple Watch Series 4 waxay u baahan tahay saqafka: Apple waxay kiraysaa soo saaraha labaad Compal Electronics si ay ugu horreyn uga caawiso
Inaan haysto Apple waa inaan yeesho hanti
Sida looga baxo barnaamijka macOS Mojave beta
Haddii aad ka daashay rakibidda macOS cusub 'Mojave beta' toddobaad kasta, waa tan sida aan uga joojin karno barnaamijka beta-ka ee ku jira Mac-gaaga.
Sida loo sahlo xirmooyinka faylka ee macOS Mojave
Qodobkaan waxaan ku tusineynaa sida aan u dhaqaajin karno howlaha Batariyada ee laga heli karo macOS Mojave
Barnaamijka Waze ayaa hadda loo heli karaa CarPlay
Saddex fiidiyow oo cusub oo ka mid ah shaqooyinka Apple Watch Series 4
Ogaanshaha dhibcaha Apple Watch waa la joojiyaa markii hore ... haddii aad ka weynaato mooyee
Apple wuxuu joojiyaa dareeraha dayrta ee Apple Watch Series 4 asal ahaan illaa aad ka weynaato mooyee
Apple waxay xireysaa iibsashada Shazam waxayna tirtiraysaa xayeysiinta
Ansixinta Midowga Yurub kadib, Apple waxay durbaba ka shaqeyneysaa isku darka Shazam ee Apple Music isla markaana si kadis ah u baabi'ineysa dhammaan xayeysiisyada ay muujisay.